Kedu ihe bụ surimi na gịnị ka e ji mee ya? | Bezzia
Emilio Garcia | 13/01/2022 15:03 | Emelitere ka 14/01/2022 09:41 | Nri, Home
Ụlọ ọrụ nri na-agbalịsi ike inye nri na-eme ka nri anyị dịkwuo mma n'ụzọ ọ bụla. Ụlọ ahịa ụlọ ahịa nwere ngwaahịa ọhụrụ mara mma, ụfọdụ sitere na latitudes ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, soy, quinoa ma ọ bụ surimi Ha na-emeju nri Mediterranean dị egwu na akụrụngwa ha dị mma. Inwe ike ịchọpụta ihe oriri ndị a na ndị ọzọ wee tinye ha n'ime usoro anyị na-eme ka menu anyị dị iche iche na nha nha n'ihe gbasara nri. Na okpomọkụ nke stovu a na-amụ ajụjụ ụfọdụ nwere ikike niile: Kedu ihe bụ surimi na gịnị ka e ji mee ya?
1 Gịnị bụ surimi
2 Njirimara nke surimi
3 Surimi na protein
Gịnị bụ surimi
N'ozuzu, anyị na-enwewanye ohere ịnwale ụtọ ọhụrụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụ mmadụ ole na ole ndị na-eri ihe ka amaghị uru nri ha na-eri bara. N'ihi ihe ndị a, mgbe a mụrụ ngwaahịa ọhụrụ ma na-apụtawanye ìhè, ajụjụ na-ebilite ugboro ugboro gbasara njirimara nri ya. N'agbanyeghị na anyị na anyị ruo iri afọ ole na ole, ajụjụ Gịnị bụ surimi ka na-emeghe. Nye ọtụtụ ndị mmadụ, ọ bụlarị ngwaahịa a na-ahụkarị, nke a na-ahụ anya na efere dị ka nke anyị dị ka salpicón nri mmiri ma ọ bụ pinchos na-atọ ụtọ nke Basque gastronomy. Maka ndị ọzọ, ọ bụ ngwaahịa na-aga n'ihu na-apụta ìhè maka ọhụụ ya n'ụzọ dị iche na ihe ndị a na-ahụkarị nke nri Spanish omenala.
Dị ka ọ dị na cheese Manchego ma ọ bụ ham Iberian na omenala gastronomic anyị, surimi bụ ngwaahịa ọdịnala n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa anyị. Ebe nna nna ya malitere n'oge, mgbe ọ pụtara dị ka ụzọ isi chekwaa azụ. Dị ka àgwà ọma nke aha ya na-egosi, mmalite ya bụ Japan. ihe dị ka otu puku afọ gara aga na ihe okwu ya pụtara bụ "minced azụ fillet". N'ihi nke a, na-eche na mba nke ọwụwa anyanwụ ihe surimi bụ ihe na-adịghị mma, dị ka ọ na-eme ka anyị na-eme ya na anụ ezi anụ ezi ma ọ bụ stews akwukwo nri na sausaji. Nke bụ eziokwu bụ na surimi dị na nri ndị Japan dị ka udon ma ọ bụ sushi kwa ụbọchị.
Njirimara nke surimi
Iji kpochapụ ihe omimi ahụ kpamkpam gbasara ihe surimi bụ, akụkụ ndị dị mkpa ka a ga-edozi. Ebe ọ bụ na e kere surimi na narị afọ nke XNUMX, o doro anya na nri, usoro ya na nkà na ụzụ emepụtala ọtụtụ ihe. Karịsịa na narị afọ gara aga, mmepụta ndị na-arụ ọrụ aka enyela ụzọ nkọwa ndị ọzọ dị mgbagwoju anya na na nkwa ịdị ọcha niile. Otú ọ dị, Usoro nkọwa surimi ka dị otu fọrọ nke nta ka 10 narị afọ mgbe e mesịrị. Iji nweta àgwà surimi, ọ dị mkpa iji azụ dị ọhụrụ na site na ya, họrọ nke kasị mma: ya steaks. Otu n'ime ụdị kachasị mma maka nke a bụ pollock Alaska, bụ́ nke a na-egbutu n'úkwù ya ozugbo a sachara iji nweta protein ya. Ịmara akụkụ ndị a bụ nnukwu mmasị mgbe ị na-aza ihe surimi bụ. Site n'iji ohere úkwù azụ̀ ọhụrụ, surimi bụ a akwa ozo nri a dị ka ya, tụkwasara uru gị niile.
Ọ dịghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla gbanwere, mgbe ahụ, na nri a. Anyị na-ekwu "ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ" n'ihi na ọnọdụ ndị e ji mee ya emeela otú ahụ. N'echiche a, surimi dị ka nke ahụ
A na-eme Krissia® na obere okpomọkụ oge niile iji nweta ogo kachasị elu na ịdị ọhụrụ nke protein. Agbanyeghị, ọ na-enye aka mgbe niile ịgụ ozi nri tupu ịzụrụ ngwaahịa ọ bụla. N'ụzọ dị otú a, Krissia® surimi mmanya enweghị ihe nchekwa ma ọ bụ agba arụrụ arụ ya mere, ha na-ahọrọ pasteurization dị ka nkwa nke nchekwa nri. Usoro a dị na nri ndị bụ isi dị ka mmiri ara ehi na yoghurt na na-enye anyị ohere ịnwe surimi mgbe niile na friji anyị.
Surimi na protein
N'ịbụ ndị ejiri akụkụ kachasị mma nke azụ mee surimi, nwere nnukwu protein dị na ya gụnyere amino acid niile dị mkpa ma pụta ìhè maka ha mfe assimilation na mgbaze.
Ọnụ ego azụrụ akwadoro dịka ndị ọkachamara n'ihe gbasara nri siri kwuo bụ n'etiti 3 na 4 servings kwa izu. Na-enweghị ịbụ onye nnọchi anya ya mana ọ bụ ụzọ dị mma maka ya, na-eri surimi na-enyere aka ịbawanye ọnụọgụ protein kwa ụbọchị O nwekwara uru ndị ọzọ ha nhata dị mkpa. Nke mmanya surimi nwekwara Omega 3, ụfọdụ ihe dị mkpa polyunsaturated fatty acids maka ezi ahụike obi na vitamin B12, naanị dị na nri sitere na anụmanụ, nke na-enyere aka belata ike ọgwụgwụ na ike ọgwụgwụ. Ihe ndị ọzọ dị na mmanya surimi bụ mineral dị ka selenium, dị mkpa maka ịrụ ọrụ nke ọma nke usoro ahụ anyị ji alụso ọrịa ọgụ.
Ya mere, ọ bụrụ na-amasị gị iri nri nke ọma ma na-eche banyere nri gị, surimi bụ ezigbo enyi iji mejupụta na ime ka efere gị dịkwuo mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Kedu ihe bụ surimi na gịnị ka e ji mee ya?